Akụkọ - Mmetụta nke Covid 19 na Igwe Nku Igwe Igwe Ọfụfụ-Global Report Report 2030
Ọrịa na-efe efe COVID-19 (coronavirus) emeela ka okpukpu abụọ chọọ maka ịkpụzi ịkpụzi, ihe nkwakọ ngwaahịa na ihe ọ beụ beụ ihe ọ beụverageụ. Ka ndị ahịa na-achọ ihe ndị dị mkpa dịka ncha, ọgwụ ọgwụ na ngwaahịa ndị ọzọ na-ehicha, mkpa maka igwe na-akpụzi dị iche iche dị ka ịmịpụ na extrusion. Ọchịchọ a na-enwetụbeghị ụdị maka nhicha na ngwaahịa disinfection emeela ohere maka ụlọ ọrụ dị iche iche na ịkpụzi igwe iji nweta uru. Dika ndi mmadu n’eji otutu oge ha n’onwe ikewapu onwe ha, ochicho ihe onunu dika mmanya, mmiri na biya na abawanye.
Dika ndi mmadu na eme ngwa ngwa mejuputa ngwa ahia ha, igwe ihe ndi ozo eji meputa igbe gha aghaghi acho. Sidel, onye na-emepụta usoro ịkpụzi ihe ọkụkụ, agbanweela etiti kacha mma n'ụwa ka ọ bụrụ ebe nrụpụta maka PET (polyethylene terephthalate) aka kara aka. Ya mere, ịfụ ịkpụzi igwe ahịa na-atụ anya na-agba àmà dị ịrịba ama ibu n'oge amụma oge.
Nmeputa ohuru na igwe ndi mmadu na-adiwanye. Igwe ndị a dọtara uche nke ndị na-etinye ego n'ihi na sistemụ ndị a nwere ike ịmị karama dị elu maka nri, nkwakọ ngwaahịa na ngwa njem. The igbu ịkpụzi igwe ahịa na-atụ anya ka tozuru okè na mmelite nke usoro ziri ezi na ọsọ, na ga-eru a uru nke 65,1 ijeri US dollar site 2030. Plastic emepụta na-ahọrọ mgbanwe na repeatability nke gbatia igbu ịkpụzi igwe. Teknụzụ mgbanwe na igwe na -emepụta ohere maka ụlọ ọrụ na akụrụngwa, ihe ọverageụ ,ụ, ahụike, yana ọrụ ịchọ mma.
Na ịkpụzi igwe dị na ahịa, ihe kachasị nnukwu cavitation dọtara echiche ndị ọchụnta ego. Machinlọ ọrụ na-arụpụta ihe eji arụ ọrụ na Canada nke Pet All Manufacturing Inc. na-arụ ọrụ nke ọma iji mepụta igwe na-agba ọsọ iji hụ na mgbanwe ngwa ngwa na-enweghị mkpa ngwaọrụ. Ya mere, plastic emepụta ghọtara na-eri-irè na elu-ọsọ ọrụ nke elu gbatia igbu ịkpụzi igwe.
Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ iji mezuo mkpa nke ihe ọ beụverageụ na ihe ọ -ụ -ụ na-adịghị. Otú ọ dị, maka ndị na-emepụta plastik, ịnọgide na-enwe ikuku ikuku jupụtara na ya nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Ya mere, ụlọ ọrụ dị na ịkpụzi ịkpụzi igwe ahịa na-agbakwunye usoro dị ala ma dị elu nke na-adịghị emetụta usoro ndị ọzọ. Dị ka PET igbu ịkpụzi ngwa na-emepe emepe ngwa ngwa, na-emepụta na-amụba ha R&D ike ịzụlite elu igbu ịkpụzi igwe.
Ndị ụlọ ọrụ dị na ahịa igwe na-akụ ihe na-emepe emepe na-emepe emepe nke dabara adaba maka iwekọ ikuku agbakọ, nke na-eme ka ikuku wee laghachi na usoro nrụgide dị ala nke ihe ọkụkụ. Ndị tankị nchekwa ikuku na mpaghara dị iche iche nwere ike inye aka belata nrụgide mgbada na ngwa PET. The igwe emeputa ga ịkpọtụrụ ndị ọkachamara mata na tụọ mgbali dobe na igbu ịkpụzi igwe.
Soro ụdị ndị ọzọ? Rịọ a ahaziri akụkọ na igbu ịkpụzi igwe ahịa
Ọfụfụ ịkpụzi igwe ahịa na-agbanwe, na-ewebata teknụzụ ọhụrụ na-akụ ụfụfụ ọhụrụ na nke akụnụba. Ọmụmaatụ, igbu ịkpụzi technology ngwọta na-eweta W.MÜLLER GmbH-agba mbọ ka ihe ịga nke ọma -fụfụ ịfụ ebu containers ya atọ-oyi akwa technology. Ihe nkpuchi nkpuchi ahụ jikọtara ya na isi ụfụfụ na-eme ka ngwa ngwa siri ike nke akpa ahụ ma nyere aka belata ịdị arọ ya.
Advanced igbu ịkpụzi technology ewepu mkpa maka ọgwụ ọfụma mmadụ. Na ndị ọrụ ikuku na-afụ mmiri, etiti oyi akwa nke akpa ahụ na nitrogen na-arụ ọrụ na usoro anụ ahụ. Nkà na ụzụ a bụ ezigbo ọrụ maka ụlọ ọrụ na ịkpụzi igwe ahịa, n'ihi na teknụzụ a na-emetụta gburugburu ebe obibi na-agbaso iwu nkwakọ ngwaahịa nri ugbu a. Karama ụfụfụ chọrọ obere okirikiri na ịfụ oge, nke na-enyere aka inyocha njirimara akụ na ụba nke akụrụngwa.
All-electric igbu ịkpụzi igwe na-eke ohere azụmahịa maka ụlọ ọrụ. Parker Plastic Machinery Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke turnkey ngwọta maka igbu ịkpụzi igwe na Taiwan. Ọ na-akwalite ya niile-electric igbu ịkpụzi igwe na ahịa na-ewu ewu maka ya elu-arụmọrụ haịdrọlik ume-azọpụta usoro. Tụnyere ọdịnala haịdrọlik presses, ụlọ ọrụ ndị na-akpụzi ịkpụzi igwe ahịa na-abawanye ikike imepụta ha iji rụpụta sistemụ ọkụ eletrik niile.
All-electric igbu ịkpụzi igwe na oke ala mmezi-akwụ ụgwọ bụ nhọrọ mbụ nke plastic emepụta n'ihi na ndị a na usoro anaghị eme ka mmanụ mmetọ. Companies na igbu ịkpụzi igwe ahịa na-elekwasị anya na-niile-eletriki usoro. Usoro ndị a agaghị eme ka mmanụ wụfu ma chekwaa ụgwọ mmezi maka ndị nrụpụta plastik.
Logbasa ihe ohuru na igwe na-akpụzi igwe chọrọ ọtụtụ afọ nke injinịa. Tech-Long Inc.-Asia na-emepụta ihe ọ packagingụ packagingụ ihe ọverageụverageụ ihe ọverageụverageụ, na ntọala azụmahịa siri ike na United States na Europe, ma na-agbanwe igwe ya na-akpụzi ya, nke nwere ike ịmepụta karama karama maka ihe ọverageụverageụ na ihe ọ -ụ -ụ na-enweghị ihe ọ Andụ Andụ Na ndị buru ibu. Ndị ụlọ ọrụ dị na ahịa igwe na-akụ ihe na-emepụta usoro iji mepụta karama akpàràkpà dabere na teknụzụ kpo oku kachasị mkpa.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ndị na-akụzi igwe na-akụzi ihe na-emeziwanye ikike ha nwere iji mepụta usoro ngwakọ. Ha nwere ọkachamara na igwe nke nwere ike imeju ihe achọrọ nke polyethylene, polyethylene terephthalate na polyvinyl chloride materials. Ndị na-emepụta akụrụngwa na-enyocha ọtụtụ ohere site na mmepe sistemụ na-emepụta tankị mmanụ, ihe oriri mmanụ, ihe egwuregwu na arịa ụlọ.
Ọchịchọ a na-enwetụbeghị ụdị maka disinfection na ngwaahịa nhicha emeela ka a nabata igwe ịkpụzi iji mee ncha aka, disinfectants na hydrogels. All-electric igbu ịkpụzi usoro na-aghọ ndị ọzọ na-ewu ewu na ahịa. N'oge amụma oge, ịfụ ịkpụzi igwe ahịa na-atụ anya na-eto eto na a agafeghị oke onyinye kwa afọ ibu ọnụego nke banyere 4%. Yabụ, mgbasawanye enweghị atụ nke ịgbatị teknụzụ extrusion akpọrọ mmụba aghọọla ihe na-egbochi mmepụta plastik. Yabụ, ụlọ ọrụ kwesịrị ịnabata nnabata dị ukwuu sitere na ngwaahịa ma ọ bụ nnagide ngwaahịa iji zere nsogbu mgbasa ebu. Characteristicsdị ọnụ ala dị ala nke nkà na ụzụ nke extrusion mere ka ọchịchọ maka ịkpụzi igwe na-agba ọkụ.
Akụkọ ndị ọzọ na-ewu ewu sitere na Nnyocha Azụmaahịa - https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/stellar-22-cagr-set-to-propel-transparent-ceramics-market-forward-from-2019-to - 2027-ebe-804840555.html
Mmachi nhazi nke igbu igwe na ịdị adị nke ndị ọzọ na-egbochi uto nke ahịa ịkpụzi igwe
Market penetration na ngwaahịa mmepe na-enye ohere maka igbu ịkpụzi igwe ahịa
Arịrịọ maka nyocha mmetụta mmetụta covid19 - https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=65039